ပရောဖက်ပြု: "ဣသရေလအမျိုး၌ရွေးကောက်ပွဲမျ | Apg29
Yitzhak Kaduri ၏သတင်းစာ Clip ။
ဒါဟာအစိုးရဖွဲ့စည်းရန်နိုင်ခြင်းဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုဣသရေလအမျိုး၏သမိုင်းအတွက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် image ကိုဣသရေလအမျိုးကိုဒီနှစ်နှစ်ဦးကိုရှေးခယျြခဲ့ပေမယ့်အစိုးရမှဦးဆောင်။
ယခုဣသရေလအမျိုး၌လက်ရှိအခြေအနေနှင့်ဆက်စပ်နိုင် 40 နှစ်အရွယ်အနာဂတ္တိရှိပါသည်။
အနာဂတ္တိအရှင်ဘုရား Yitzhak Kaduri မှလာအထက်တွင်ထူးခြားတဲ့လူကိုမြင်ဓာတ်ပုံကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ မသာသူ 2006 ခုနှစ်တွင်ကွယ်လွန်သွားသည့်အခါသူက 108 နှစ်ကဖြစ်ခဲ့သည်။ အကြောင်းမူကား,
သူဟာအလွန်အမင်း, မှတ်သင်ယူနှင့်ဂြူးမြားစှာအတှကျဆရာခစျြတျောမူခဲ့သညျ။ သောအမှုဖြစ်ခဲ့သည်, ဒါဟာသူ့ရဲ့အသုဘစီတန်းနောက်တော်သို့လိုက်သောသူတို့၏အကြောင်းကို 300,000 ခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်နှင့်ယေရုရှလင်နှောင်းပိုင်းအရှင်ဘုရား Yitzhak Kaduri အဘို့ငိုကြွေးမြည်တမ်းကိုကြွေးကြော်ကြောင်းပိုစတာများဖြင့်ဖုံးလွှမ်းခဲ့သည်ကောင်းအရေအတွက်ကိုပေးသည်။
သူ၏ဘဝပုံစံအလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူဟာငယ်ကိုစားကြ၏စကားပြောခဲပြောသော, ဆင်းရဲမွဲတေမှု၏အသက်တာကိုအသက်ရှင်။ , သူတစ်ခုခုဖျော်ဖြေတဲ့အခါမှာဒီနေသော်လည်းသူသည်များစွာသောလူရဲ့နားရွက်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
သူမရှိသလောက်ပြောသော, ဒါပေမယ့်သူလုပ်ခဲ့တယ်အခါသူကပြောသည်ဘယ်အရာကိုရေးမှတ်ခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်း 40 အကြာ, သူတို့ကမရှေိယကိုဣသရေလအမျိုး၏လက်တွေ့ကျတဲ့နိုင်ငံရေးထဲမှာတှေ့မွငျရပုံကိုမေးတော်မူလျှင်, ဒါမှမဟုတ်အဲဒီမှာသူကမြင်ဘူးသလော သူ၏အဖြေကိုတိုတိုဖြစ်ခဲ့သည်:
"ဣသရေလအမျိုး၌ရွေးကောက်ပွဲများကဲ့သို့ပင်, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမအစိုးရကမေရှိယကိုကြွလာအနီးဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ "
ဘယ်လိုအခြေအနေကဣသရေလအမျိုး၌ယခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစိုးရဖွဲ့စည်းရန်နိုင်ခြင်းဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုဣသရေလအမျိုး၏သမိုင်းအတွက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် image ကိုဣသရေလအမျိုးကိုဒီနှစ်နှစ်ဦးကိုရှေးခယျြခဲ့ပေမယ့်အစိုးရမှဦးဆောင်။
သင်တန်း၏, လူအပေါင်းတို့သည်ပရောဖက်ပြုဆန်းစစ်ဒါပေမဲ့သူတို့မထီမဲ့မွငျမဖြစ်သင့်ပါကဤတိုတောင်းကျမ်းပိုဒ် says:
"Do ပရောဖက်ပြုခြင်းကိုမထီမဲ့မြင်မမှတ်ဘူး။ " 1 Th ။ 5:20 ။
ဒါဟာတကယ်သညျယရှေုမည်သည့်အချိန်တွင်မလာနိုင်သည်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့အချိန်ပါ! ကျနော်တို့ကဒီထူးခြားတဲ့အနာဂတ္တိ၌တိတ်ဆိတ်စွာနေမရပါ။ အခုတော့မဟုတ်ဘဲတုံ့ပြန်ရန်မည်သို့မည်ပုံ၏မက်ဆေ့ခ်ျကိုဖတ်သူလူတစ်ဦး၏တာဝန်သာဖြစ်ပါသည်။
ယရှေုသညျအမြားအပွားမယ့်အစားယရှေုသညျ '' ပြန်လာ၏မက်ဆေ့ခ်ျကိုဦးတည်နေတဲ့အနုတ်လက္ခဏာသဘောထားကိုရှိသည်နှင့်ဒီယခုဖြစ်ပျက်မနိုင်ကိုယုံကြည်သောသူခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ ယရှေုသညျဒုစရိုကျ၏ထိုကဲ့သို့သောကျွန်ခေါ်ဆိုဘို့ဤလေးနက်ပါ!
"ကျွန်ဆိုးနဲ့သူ့ကိုယ်သူပြောပါတယ်လျှင်ဒါပေမယ့်ငါ့သခင်ကိုနှောင့်နှေးနေသည်" ။ မ။ 24:48 ။
ထိုသို့ယရှေုသညျအဘယ်သို့မိန့်တစ်ခုကျွန်ဆိုးလျှင်ဒီနေရာတွင်ယေရှု၏ထိုစကားနှင့် ဆက်စပ်. အတွက်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကြိုးစားနိုင်ပါ။
ကျနော်တို့မှာစကားပွောဒါကြောင့်သင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏တစ်ခုသို့မဟုတ်မှားယွင်းသောအသက်ရှင်နေထိုင်, ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူထိတွေ့ရမှအခမဲ့ခံစားရကြသည်မဟုတ်။ ဒါဟာအမြဲနှောင်းပိုင်းကဖြစ်နိုင်, အဆုံးအဖြတ်ခြေလှမ်းများယူအပေါ်တွန်းအားပေးရန်ယခုမဟုတ်ပါတကား!